Caadi ah: 5 Sababood oo ah inaanan helin Hits Wax Badan On Site ah
Waxyaabaha soo socdaa waa liis shan goobood oo si joogto ah loo dayacay sababtoo ah mulkiiluhu ma fahmo sida ay u shaqeeyaan ama sida loo maareeyo. Iska fiirso in isbeddelladu aysan si dhakhso ah u helin natiijooyin wax ku ool ah isla markaana u baahan sabir.
Jason Adler, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegga Dijital ah, wuxuu ku sharraxaa qaladaadka ugu caansan SEO.
1. Maqnaanshaha Maqnaanshaha Wanaagsan
Waqtiga hadda, mashiinno raadin , gaar ahaan Google, waxay daaweeyaan tayada waxqabad leh muhiima aad u muhiim ah oo ay dejiyaan algorithms si ay u hubiyaan in ay qabtaan oo keliya maaddo wanaagsan - how to configure a home network. Waxyaabaha hooseeya ee tayada leh iyo boggaga guud ee guud waa kuwa horey u soo gelaya bogga hoose ee hits iyo yaraynta taraafikada. Marka laga reebo makiinadaha raadinta, warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale leh saameyn aan toos ahayn oo ku saabsan rikoodhka iyo taraafikada shabakadda .
Xogta hubaal ah in la kordhiyo taraafikadu waxay ku qanacsan tahay qoraallada qoraallada qoraallada ka dib Panda, iyo Penguin, oo lagu daabacay bogga sare,
2. Ujeedada loogu talagalay ereyada tartanka sare
Waxay inta badan ka hadlaysaa matoorada raadinta. Websocodyo badan ayaa ku tartamaya bogga ugu horreeya ee SERP, oo leh toban boos oo keliya. Mashiinnada raadinta waxay isku dayaan inay soo bandhigaan goobaha ugu qanisan ee ku yaal tobanka xul ee ugu sareeya. Inta badan goobahaasi waxay ka warqabaan ereyada ugu caansan ee loo isticmaalo suuqa..Sababtoo ah tartankaan, iskuday in lagu daro ereyada caanka ah ee caanka ah ee bogga soo socda waa mid adag
Maadaama mawduucyada caanka ah ee caanka ah ay ka maqan yihiin su'aasha, hab kale ayaa ah in la isticmaalo raadadka dheer. Ku dar ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah markaad isticmaasho qalabka Google ee muhiimka ah maaddaama ay leeyihiin tartan yar. Websaydhku wuxuu noqon karaa mid aan la mid ah ereyada caanka ah ee caanka ah, laakiin waa hab fiican oo lagu hormarin karo aragtida aaminaadda ee makiinadaha raadinta.
3. Shabakada qallafsan
Google wuxuu u adeegsadaa xawaaraha qadar ahaan tan iyo markii uu rabo in uu sarreeyo khibradiisa isticmaalkiisa. Xitaa si kastaba ha ahaatee, macaamiisha ayaa u badan inay dib ugu noqdaan websaydh iyaga oo si dhakhso ah u socda. Haddii ay si tartiib tartiib ah u socoto, isticmaalayaasha ayaa ka baxaya bogga. Bogga ama bogga waxaa laga yaabaa inay helaan gaadiidka gudbinta ilaha kale laakiin ay ku guuldareystaan ​​inay buuxiyaan xawaare ugu yaraan 4-5 ilbiriqsi, sidaas awgeed waxay martida ka dhigaan inay baxaan iyagoon wax daawan. Haddii wakhtiga raristu uu kordho website-ka, ka dibna boggaga internet-ka ah ayaa hubaal ah in la hagaajiyo taas oo sidoo kale u egtahay in ay koraan taraafikada. Waxa kale oo ay kordhisaa fursadda ah inay ku soo baxdo tobanka ugu sareeya.
4. Hit by Panda ama Penguin
Isbeddelka ku saabsan mashiinka raadinta algorithm wuxuu saameyn karaa sida websaydhku ugu tiirsan yahay SERP, oo markaa, tirada gaadiidka la helay. Haddii Panda ama Penguins ay ku dhufaan goobtaada, markaa baabuurtu waxay la kulantaa maalin kasta inay si weyn u dhacdo. Isbarbardhig warbixinta Google Analytics illaa markii ay baabuurtu bilowday inay hoos u dhacdo marka Google ay ku cusbooneysiisay algorithm. Haddii ay jirto xiriir isdabajoog ah, ka dibna u gudub si aad u sameyso isbeddelada iyo sidoo kale in aad dib u soo kabsato taraafikada bogga
Haddii aanay labadaba midkoodna, laga yaabo inay weli yar tahay, waxaa jira wax yar, ma jirto wax caddayn ah isticmaalka warbaahinta bulshada, ilaha kale ee taraafikada, ama sameynta hal ama in ka badan oo ka mid ah qaladaadka SEO-ga. 8)
5. Shaqaaleynta shirkad SEO ah oo qaldan
Waxaa jira dad badan oo ku takhasusay SEO oo ku shaqeeya internetka maanta. Doorashada shirkadda SEO ee khaldan waxay ku kici kartaa ganacsigeeda gaadiidkooda iyo fursadaha kale. Ha aaminsanin wax kasta oo ka muuqda internetka. Hubi oo hubi qof kasta ama koox aad ku qaadato falanqaynta SEO.